Khadka: waa Apple Podcast cusub oo yeelan doona taxane u gaar ah dhamaadka sanadka | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan in muddo ah ka hadlaynay ku saabsan shirkadda Apple ee ku soo biirtay adoo adeegsanaya asal ahaan asalka. Bishii Maajo ee sanadkii hore, wararkaas xanta ah waxay bilaabeen inay soo uruuriyaan uumiga, iyagoo soo jeedinaya in Apple ay isu diyaarineyso inay diirada saarto abuurida barnaamijyadeeda gaarka ah.
Podcasts-ka rasmiga ah ee Apple ayaa la filayay inay diiradda saaraan kor u qaadida macluumaadkaaga Apple TV + Si wax ku ool ahna waxay noqotay sidaas. Horaantii sanadkan, ka hor bilowga xilli-ciyaareedka labaad ee taxaneheeda loogu talagalay dhammaan bini-aadamka, Apple wuxuu sii daayay podcast ku saabsan taxanaha.
Tani ma aha tan kaliya, tan iyo dhowr saacadood ka hor, Apple waxay daabacday podcast cusub, oo cinwaankiisu yahay Khadka kuwaas oo labada qaybood ee horeba hore loo heli karo. Toddobaad kasta, Apple waxay soo bandhigi doontaa qayb cusub oo ka mid ah 6 waa qayb ka mid ah barnaamijkan 'Podcast'.
In kasta oo Podcast-ka Aadanaha oo dhan uu ku saleysan yahay taxanaha hadda la heli karo, The Line podcast-ka, ayaa loogu talagalay dhinaca taxanaha taxanaha ah ee Apple soo saari doono dabayaaqada sanadkan, taxane dokumenti ah oo ka kooban 4 qaybood.
Apple wuxuu qeexayaa Podcast-kan cusub sida:
2018, koox Navy SEALs ah ayaa jabiyay darajooyin waxayna ku eedeeyeen madaxdooda, Eddie Gallagher dil, iyaga oo dhammaantood u jiiday maxkamadaynta ugu weyn ee dambiyada dagaal ee jiilka. Maraakiibta Navy SEAL ma ka gudbeen xariiqda Ciraaq? Dan Taberski wuxuu kugu jiidayaa qolkaas markii ugu horeysay, isagoo daaha ka rogaya sida Mareykanku ula dagaallamayo dagaalladeeda maanta una soo bandhigayo sheekada ay ka maqnaayeen warbaahintii tebisay dacwadda. Wadahadal hoose oo lala yeesho in kabadan 50 hawl wadeeno gaar ah, taxanahan wuxuu sahminayaa sida uu uqarmay khadadka udhaxeeya sax iyo qalad ee dagaalada weligood ah, iyo waxa kudhacaya quluubta iyo maskaxda kuwa aan markab u dirirno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Khadka: waa Podcast cusub oo Apple ah oo yeelan doona taxane u gaar ah dhamaadka sanadka
Disk Drill wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple's M1